Isitudiyo Sesitayela Sesimanje esine-Balcony + Smart TV. Ibhizinisi / Ezokungcebeleka. - I-Airbnb
Isitudiyo Sesitayela Sesimanje esine-Balcony + Smart TV. Ibhizinisi / Ezokungcebeleka.
I-Stylish Studio etholakala esakhiweni sokuhlala. Ifakwe ngokugcwele futhi ilungele ukuhlala isikhashana noma isikhathi eside, ibhizinisi, noma ukuzilibazisa okuxhunyiwe.
I-Studio ingafinyelelwa yinoma yiziphi izinsiza zezokuthutha zomphakathi ezitholakala endaweni nasezindaweni ezizungezile. Izitobhi zamabhasi zitholakala phakathi kwebanga lokuhamba eli-1 ukuya kwamaminithi angu-2. Futhi, uzothola Izindawo zokudlela, Izitolo ezinkulu endaweni ehamba ngezinyawo eyi-2 - 5 min.
Sizokunikeza ulwazi oludingekayo ukuze siqinisekise ukuthi unolwazi lwezinkanyezi ezi-5 ngaphakathi nangaphandle kweSitudiyo. Izincomo zethu ezithunyelwe kuwe zizofaka izinketho ezinhle kakhulu zokubona indawo, izindawo zokudlela, amabha, isiko, ama-nightclub, njll. yase-Luxembourg City kanye nezwe ngokwalo.
Ebonisa ukunethezeka nokufudumala, lesi situdiyo siyakhanya futhi sikhanya kahle. Izimele futhi inefenisha ephelele. Ifika ifakwe amashidi ombhede athokomele, amathawula kanokusho, imikhiqizo yeshawa ephambili, i-WiFi, i-Coffee Maker, ikhishi elisebenza ngokugcwele, isiqandisi, izitsha, i-kitchenware, nokunye.
Iphinde ibe nendawo encane yokuhlala kuvulandi ukuze ujabulele ukudla kwasekuseni ekuseni noma itiye lakusihlwa.
4.50 · 52 okushiwo abanye
Jabulela ukudla kwamazwe ngamazwe, ukubona indawo, ukuyothenga, nemisebenzi yangaphandle ngesikhathi sokuhlala kwakho, konke okufinyelelwa yizindawo zokuthutha zomphakathi nezizimele ngaphakathi naseduze kwakho. I-Casemates du Bock (Inqaba), i-Casemates du Bock yomibili ingamaminithi angu-10–15 ukusuka eSitudiyo.
Indawo u-Guillaume II, e-Cathédrale Notre-Dame iyimizuzu eyi-7 - 10 nje ukusuka eSitudiyo. Vakashela kabusha umlando we-Luxembourg Monument of Remembrance eteketiswa ngokuthi i-Gëlle Fra. Kuyisikhumbuzo sempi esinikezelwe kubantu bezizwe abazinikele enkonzweni phakathi nezimpi phakathi kwe-7 - 10 min drive.
Leli fulethi liphethwe i-24/7 yiqembu lochwepheshe. Kunoma yini, sicela ukhululeke ukuxhumana nanoma yimaphi amalungu eqembu lethu futhi sizokujabulela ukukusiza.